Madaxweyne Xasan oo Sheegay in Shacabka laga Qayb-galinayo Talada Dalka – Radio Daljir
Oktoobar 21, 2015 4:37 b 0
Arbaco, Oktoobar 21, 2015 (Daljir) —Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay inay muhiim tahay in talada qaranka laga qeyb geliyo shacabka, lana dhageysto rabitaankooda, si loo gaaro go’aano dhaxal gal ah.
Madaxweynaha oo shalay ka hadlayay xafladii xiritaanka ee shirka wada tashiga doorashooyinka sanadka 2016 ayaa sheegay in dadka ay qabaan cabsi iyo walaac ku aadan inaan siyaasada laga qeyb gelin, waxaana uu xusay inay muhiim tahay in la tixgeliyo rabitaankooda iyo hadaaqooda siyaasadeed.
“Waxaa rabaa inaan u sheego Mas’uuliyiinta dowlad goboleedyada ee xilka ka saaran arrintan waa inaad dadka Soomaaliyeed inta ugu badan tixgelisaan, in la dhageysto, lana qadariyo rabitaankooda siyaasadeed, dadka cabsiye qabaan, dareen ayay qabaan dhamaan hala tixgeliyo oo talada dalka halaga qeyb geliyo”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Waxaa uu sheegay in aysan jirin cid laga yeelayo inay talada qaranka isku koobto, waxaana uu intaa ku daray in loo baahan yahay in deegaanada oo dhan la gaarsiiyo wada tashiyada, si codkooda loo dhageysto.
Shirkii Madasha wada tashiga ee hanaanka doorashooyinka sanadka 2016 ayaa laga soo saaray ilaa 10 qodob oo ay ugu muhiimsaneyd in wada tashiyo laga sameeyo dhamaan deegaanada gobolada dalka, isla markaana wada tashiyada laga qeyb geliyo qeybaha kala duwan ee bulshada.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida _Arbaco_21